तपाइले बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो बट्टाईको अण्डा ! – Annapurna Daily
On May 1, 2021 16,158
नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ। यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक मानिन्छ।नेपालमा पाँच प्रजातिका बट्टाई पाइन्छन् ।